Aim-panahy - Tily eto Madagasikara
Vavaky ny Tily
Ry Andriamanitra ô, Raiko any an-danitra Ianao.Mahatsiaro ny tenako ho kely aho ka mivavaka Aminao.Omeo hery aho mba ho tonga zaza lahy salama, matanjaka, sahy, maharitra sy marina.Tohano aho mba hahay manoa ny Lalàna sy manatanteraka ny Fanekena TilyTolory ny Fanahinao Masina aho dia ho tonga zazalahy tsara fanahy, madio fo sy mazava saina ka […]
Ny tanàna Efesosy. Renivohitra tany Asia (tapak’i Asie Mineure andrefana) Efesosy. Tanàna maro mponina sy be varotra izy, sady malaza indrindra noho ny tempoly mahafinaritra. Foiben’ny fivavahana amin’ny sampy izy, indrindra fa ny fivavahana tamin’i Diana andriamanibavin’ny fahavokarana sy ny fiterahana. Be zava-betaveta ny fanompoana azy. Olona haingam-pandray hevitra diso (superstitieux) ny Efesiana, ka nanjaka […]
Fandalinana ny bokin’ny Efesiana : fitarihan-teny
Isan’ny taratasy nosoratan’i Paoly Apostoly tany Roma, tamin’izy navela hitoetra tao an-trano nohofany (Asa 28, 30 ) ity epistily ity. Misy fisalasalana be ihany na ny fiangonana tany Efesosy irery no nanoratany azy, na ny fiangonana hafa koa, satria tian’i Paoly raha vakiana amin’ny fiangonana maro ny epistily (Kol 4, 16 ). Efa nitoetra telo […]